ညီလင်းသစ်: The Lady ...
Posted by ညီလင်းသစ် au 5.12.11
ဒအဆစက အိမ်မှာလည်း လာရုိုက်သွားတယ်လို့ ဖတ်ဘူးတယ်။ အဲဒီနောက် မစ်ချဲလ်ကိုလည်း ဗီဇာမပေးတော့ဘူးလို့ ဖတ်လိုက်မိတယ် ဘယ်မှာလည်းတော့မသိတော့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူကြည့်ချင်လိုက်တာ။ ရှဲလို့ ကျေးဇူးပါကိုညီလင်းသစ်ရေ။
ဒီပို့ စ်ကလည်း ရင်ကို လာမှန်တယ်..The Lady ကို ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်မယ်ဗျို့ ..
အရမ်းကြည့်ချင် နေပြီ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ သိပ်မနေရတော့မယ့် အကြောင်း ရေးထားတဲ့ မိုက်ကယ်လ်အဲရစ်စ်ဆီက စာကို ဖတ်အပြီးမှာ ဗြိတိသျှ သံရုံးကတဆင့် အမေစုက ဖုန်းဆက်တဲ့ အခန်းပါ၊ အသံလှိုင်းတွေ သိပ်မကြည်တဲ့ ဖုန်းကို မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေ ဝဲပြီး ပြောတဲ့အခန်း...၊ ကျမ ပြန်လာဖို့များ လိုနေမလားဟင် လို့ ဖတ်လိုက်ရတာနဲ့တင် ကျမ မျက်ရည်ကျနေမိခဲ့တယ်
ဒါနဲ့.. အဲဒီကားကို လာကြည့်တဲ့သူတွေကို ပြီးတော့ အင်တာလိုက်ဗျူးဖြစ်သေးလား.... သူတို့ရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကကော ဘယ်လိုလဲ ကိုညီလင်းသစ်... ကျွန်တော်က အဲဒါကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်.. နိုင်ငံခြားသားတွေ မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တာတွေမှန်သမျှ ဘယ်လိုခံစားချက်ရှိသလဲဆိုတာကို အမူအရာတွေကြည့်ပြီးတော့ အမြဲဖတ်လေ့ရှိတယ်.... တခုခုသိခဲ့ရင်ပို့စ်လေး တစ်ခုတင်ပေးပါဦး..း))
THIS TIME WE WATCH MOVIE IS DIFFERENT. NORMALLY WE DO NOT KNOW THE STORY OR THE DETAIL SCRIPT BEFORE WATCHING. THIS TIME, WE KNOW EACH AND EVERY DETAIL OF THE STORY FROM READING, LISTENING AND LEARNING ABOUT HER. BUT STILL EARGERLY WANT TO CATCH IT......BECAUSE SHE IS THE LADY.....
ကြည့်ပြီးတော့တမျိုးတမည် အမည်မဖော်ပြတတ်တဲ့ဝေဒနာကြီးရယ် မျက်ရည်တချို့ရယ် ရှိုက်သံတွေရယ် ကျန်ခဲ့တယ်အကိုရေ ....
နိုဘယ်ဆုယူတဲ့အခန်းကို ကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်နေသလို ပေါ်လွင်အောင် ရေးထားပေးတာပဲ။ ဒါဖတ်ပြီးမှရုပ်ရှင်ကြည့်ရတော့ ပိုမြင်တတ်သွားတာပေါ့ဗျာ..း)
အရမ်းကို ကြည့်ချင်နေတဲ့ ဇာတ်ကားပါ...။
မြန်မာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုညီလင်းသစ် ဘယ်လို ရင်မျိုးနဲ့ ကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မှန်းလို့ရပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ကြည့်မိရင် မအိမ်သူလို ငိုမိမှာဘဲ။ ဘ၀မှာ အမေပြီးရင် အမေစုက အမြဲတမ်း လေးစားမိတဲ့ စံပြ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးပါ။ ဘယ်သူတွေ သူ့ကို ဘာတွေပဲ ပြောနေနေ၊ သူ့လို စိတ်မျိုးထားနိုင်ဖို့ဆိုတာက တကယ် မလွယ်တာပါ။ လာကြည့်သူ ၃..၄ယောက်လောက်ကို အင်တာလေးဗျူးကြည့်ခဲ့ရမှာ...။ :)
The post hit my heart.What a(......)review!(I can't express the proper adj for it)We shall watch it.French TV channel frequently on about the movie last week.Your writing really made me emotion.When i read Ma Eain Thu's lovely advice lol.Then.......My tear fall down asamother and wife.Nobody can deny that SHE IS GREAT LADY.Thanks for sharing Ko Nyi.
I like the 5th paragraph most in the post.Your expression in it is the climax .You and me the same taste in Piano and cello.When i listen to the music,i prefer under dim light or moon light and close my eyes....peace and quiet foramoment.
ဒီပိုစ့်လေးကိုဖတ်ပြီး----'ကျမ ပြန်လာဖို့များ လိုနေမလားဟင်' ---ဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်ရည်ဝဲခဲ့
ကြည့်ချင်လိုက်တာ... နဂိုထဲကကြည့်ချင်နေတာ ဒီပို့စ်လေးကြောင့် ပိုကြည့်ချင်သွားတယ်...
ကိုညီလင်းသစ်ရေ ဒီပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ီဒီကားကို မကြည့်ရသေးပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရသလိုပဲ သဘောပေါက်သွားတယ်။ မီရှဲရိုးလ် သရုပ်ဆောင်တာ မိတ်ဆက်ကြော်ငြာတဲ့ နေရာမှာ ကြည့်ရတာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သိပ်မတူဘူး။
အရင်ကတည်းက ကြည့်ချင်နေတာ ခု
ပိုပြီး ကြည့်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတယ် ..
ကိုညီလင်းသစ်ရေ ကြည့်ကို ကြည့်ရမဲ့ ကားလို့ တေးထားပါတယ်။ ခု ရီဗျူးဖတ်ပြီးတော့ ပို ကြည့်ချင်မိတယ်။ အခက်အခဲတွေကြားက အတတ်နိူင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားထားကြတာကိုပဲ Appreciateဖြစ်လှပါပြီ....
ဇာတ်ကား ပိုစတာထွက် ကြော်ငြာလေးတွေကြည့်နေရကတည်းက သိပ်ကြည့်ချင်နေတဲ့ကားပါ ခဏလေး ကြည့်ရတာတောင် ကြက်သိန်းတွေထလို့ အနီးစပ်ဆုံးတူအောင်ရိုက်ရတာလေးကပဲ ကျနော်တို့ရင်ကို လှုပ်ခတ်စေခဲ့တာပါပဲလေ အမေ့ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ ဘယ်လိုစာမျိုး ဘယ်လို သီချင်းမျိုး ဘယ်လိုရုပ်ရှင်မျိုးကမှ မှီအောင်ရိုက်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး သူဟာ အနှိုင်းမဲ့ ပေးဆပ်သူတစ်ယောက်ပါပဲ ။
အစ်ကို့ပို့စ်လေး သိပ်ကောင်းတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဖေ့ဘွတ်မှာ ရှယ်လိုက်တယ်ဗျး)
နမူနာတွေတော့ Youtube မှာကြည့်လိုက်ရတယ်..
စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းတာလား..မပြောပြတတ်ဘူး၊ မျက်ရည်ဝဲတက်လာတဲ့အထိပဲ။ အရေးအခင်းအချိန်ကို ပြန်သတိရသွားတာလည်းပါတယ်။ အမလည်း အဲဒီတုန်းက state ကျောင်းသူတယောက်အနေနဲ့ ပါခဲ့ဖူးတာကိုး။
ရုပ်ရှင်မကြည့်ရသေးပေမဲ့ ကိုညီလင်းရဲ့ အရေးအသားမှာဘဲ
သူ့အကြောင်းတွေ ဖတ်မိတိုင်း ဝမ်းနည်းစရာရှိရင် မျက်ရည်တွေ ထိန်းမရအောင် ကျလာမိသလို
သတင်းကောင်းလေးတွေ၊ သူပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုံလေးတွေ ကြည့်ရဖတ်ရရင်လဲ အတိုင်းမသိ ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
သူဟာ ကျွန်မရဲ့ သူရဲကောင်းပါ..
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီ အတိုင်းပါပဲ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ ကြည့်နိုင်ရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပေါ့ဗျာ၊
ကြည့်ပါ ညီမရေ..၊ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ပါဗျာ..၊း)
ဒါဆိုရင် သေချာပြီ၊ လက်ကိုင်ပုဝါသာ ဆောင်ထား ပေတော့ မဘေဘီရေ...၊း)
မဗျူးလိုက်နိုင် ဘူးဗျာ၊ ရုပ်ရှင် အပြီးမှာ အားအင်တွေ ဆုတ်ယုတ် သွားသလို နုံးခွေပြီး ကျန်ခဲ့တယ်၊ ထိုင်ခုံမှာပဲ အကြာကြီး ဆက်ထိုင်နေဖြစ် သေးတယ်၊း(
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ကြားကနေ ရိုက်ခဲ့တာ ချီးကျူးစရာ ပါပဲ၊ တကယ့်ကိုပဲ “ထိ” တဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ..၊
That's right! There areagreat deal of risks in making her lifeamovie as the entire world knows it thoroughly. That's why people become so curious to see how the movie can interpret the greatness of the Lady.
ညီမလည်း ကြည့်ပြီးပြီလား? ဟုတ်တယ်နော်၊ အဆုံးမှာ အဲဒီလိုကြီး ကျန်ခဲ့တယ်...၊
ကြည့်ဖို့ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ် ညီမရေ၊
ကျနော်တော့ အဲဒီအခန်းကို မျက်စိထဲမြင်ပြီး ကျန်ခဲ့တယ်ဗျာ..၊
ကိုယ့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမ တခြား မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ အတူတကွ ကြည့်ချင်ပေမယ့် အခြေအနေက မပေးခဲ့ ဘူးဗျာ၊း) ပွဲမစခင်က ဗျူးချင်နေပေမယ့် ပွဲအပြီးမှာ စကားဟဟတောင် မပြောနိုင်တော့ဘူး အမရဲ့၊ မောပြီး ကျန်ခဲ့တယ်..၊း)
Yes, I also watched those French TV channels' interviews. They are nice. I'm also happy to know that you love piano and cello, too. :) Let me take this opportunity to thank you for your appreciation and regular visits as ever!! :)
ကျေးဇူးပါဗျာ၊ လာလည်တဲ့ အတွက်ရော.. ကွန်မန့် အတွက်ပါ..၊
ဒီမှာလည်း ရုံတင်တာ ၄-၅ ရက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်၊ သိပ်မကြာခင်တော့ နိုင်ငံတော်တော် များများမှာ ပြမယ်လို့ ထင်တာပဲဗျ...၊
ဟုတ်ကဲ့..၊ အဆင်ပြေရင် ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်..၊
ကျေးဇူးပါဗျာ..၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ မစ်ရှဲလ်ယိုး သရုပ်ဆောင်တာ ကောင်းပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုတော့ ဘယ်လိုမှ မတူနိုင် ပါဘူး၊ ရုပ်ရှင် ကြည့်နေတုန်းမှာလည်း သူက သတ်သတ်၊ အမေစုက သတ်သတ်ပါ၊ ဒါပေမယ့် အမေစုနဲ့ အတူဆုံးလို့ ဆိုရမယ့် မင်းသမီး တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ အတတ်ပညာနဲ့ ဖော်ကျူးတဲ့အခါ ရသမြောက် သွားတယ်လို့ ဆိုလိုချင် တာပါ..၊
ကြည့်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ပြည့်စေဖို့ ကျနော် တကယ်ပဲ ဆုတောင်းပါတယ် ညီမရေ..၊
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ၊ တကမ္ဘာလုံးက သိတဲ့ အကြောင်းအရာကို risk ယူပြီး အခက်အခဲတွေ ကြားက အတတ်နိုင်ဆုံး ရိုက်ခဲ့တာကို appreciate ဖြစ်တဲ့ စိတ်နဲ့ ကြည့်ဖို့ပဲ လိုတာပါ၊ အမေစုကို ချစ်တဲ့ စိတ်ကိုတည်ပြီး အဲဒီအပေါ် ရုပ်ရှင်ကပေးတဲ့ ရသကို ခံစားဖို့ပဲ မဟုတ်လားဗျာ..၊
အမှန်ပါပဲ ညီရေ..၊ အတူ မရှိနိုင်တဲ့ အမေစု အကြောင်းကို ရုပ်ရှင်ရဲ့ အတတ်ပညာနဲ့ ထပ်ပြီး အောက်မေ့ သတိရစေဖို့ ပါပဲ၊ အမြန်ဆုံး ကြည့်ခွင့် ရပါစေဗျာ..၊
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို ကိုယ်တိုင် ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေအတွက်ဆို ဒီရုပ်ရှင်က ခံစားမှုတွေ ပိုပြီးတော့ ပေးပါလိမ့်မယ်..၊
ဟင်.. စ,လုံးမှာ တင်မယ်လို့ မထင်ဘူးလား? အဲဒီလို ဖြစ်သည့်တိုင် အင်တာနက်ပေါ်မှာ မကြာခင်တော့ တွေ့နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ..၊
ဒါရိုက်တာ Luc Besson က ပြောတယ်၊ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ဒေါ်စုကို စာတမ်းတစ်စောင်၊ သမိုင်းတစ်ခုလို ပုံဖော်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ ကြည့်သူတွေရဲ့ နှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်ပြီး သူ့ဘဝကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ပိုပြီး နားလည်ခံစား လာအောင် ရည်ရွယ်ပါတယ်-တဲ့၊ အမေစုကို ချစ်သူတွေ အတွက်တော့ emotional ဖြစ်စေမှာ အသေအချာပါ..။
Hi Ko Nyi Linn Thit,
My name is Phone Lwin and currently in Uzwil, Switzerland until end of Feb next year. Could you please kindly point me out where can I watch the movie near Uzwil, Wil or St.Gallen area. I hope movie got English sub title :) Everything here is in German and I have no idea.
Your review is so great that I feel deeply sad. I will watch "The Lady" movie for sure.
Review လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်တယ် ကိုညီလင်း...
သွားကြည့်ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်...း)
မကြည့်ရသေးဘဲ.. ညီလင်းရေးတာကို ဖတ်ရတာနဲ့တောင် ခံစားရ.. မျက်ရည်ကျရတယ်..။ ကျေးဇူးးပါ...
Review လေးကို ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်သွားပါတယ်...။ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်မယ့်ကားပါ.. မျက်ရည်ကတော့ ကျမှာသေချာတယ်..
မောင်ညီလင်းရဲ့ အရေးအသားနဲ့တင့် ပီပီပြင်ပြင် ကြည့်နေရသလိုပါပဲ။ ကြည့်ခွင့်လေးတော့ ကြုံချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ အဲဒီကားလင့်ကို ဒီနေ့ ဘဲ ရတယ် အစ်ကို...
ဇာတ်လမ်း မကြည့်ရသေးခင် အစ်ကို့ ပိုစ့်လေးကို အရင် ဖတ်ကြည့်သွားတယ်...
မကြည့်ရသေးပေမယ့်လို့ ထွေလာမှာ ကြည့်ရတာတော့ မီရှဲယိုက ဒေါ်စုလို ဂရုဏာပါတဲ့ အပြုံးမျိုး ပြုံးနိုင်ပါ့မလားလို့ သံသယဝင်မိတယ်...
အဲဒီအပြုံးမျိုးက ပြုံးဖို့ က မလွယ်ဖူးလို့ ထင်မိလို့ ပါ...
Dear Ko Phone Lwin ...
If I checked correctly, there isn't in St-Gallen. I don't find one even in Zurich either. It's quite strange that they don't show this movie. But, I looked on internet only so I might be wrong. You might want to havealook in the newspapers. Here in Swiss French part, we have both French version and original version. Sorry about that and good luck!
ကောင်းတယ်ဗျို့၊ မလွတ်သွား စေနဲ့....၊း)
ဝေမျှခွင့်ရတာဟာ မင်္ဂလာ တစ်ပါးပါပဲဗျာ..၊း)
ဟုတ်ကဲ့ အမ..၊ တကယ်တော့ ကျနော်ရေးတာထက်ကို အများကြီးပိုပြီး ဝမ်းနည်းဖို့ ကောင်းတာပါ အမရာ...၊
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ပါဗျာ..၊
ဟုတ်ကဲ့..၊ ကြည့်ခွင့်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒေါ်စုနဲ့ တူဖို့၊ မှီဖို့ ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ သူ့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ သူ့ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုက မျက်နှာမှာ ပေါ်နေတာမို့ တခြားလူ တစ်ယောက်အတွက် တုနိုင်ဖို့က မလွယ်နိုင်ဘူးလေ၊ ကျနော်ကတော့ မီရှဲလ်ယိုးကို ဒေါ်စုအကြောင်း တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်ဟန်အမူအရာနဲ့ ပြန်ပြောပြနေတဲ့ မင်းသမီး တစ်ယောက်လို့ မြင်သလို သူ့ကို ကျော်ပြီး သူ ပြနေတဲ့ ဒေါ်စုကိုလည်း တပြိုင်နက်တည်း မြင်နေခဲ့ ပါတယ်..။
ကျေးဇူးပါ ကိုညီလင်းသစ် ရေ။ တကယ်ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင် Review လေးပါ။
Thanks Ko Nyi Linn Thit,
I also checked on the web and it is true that the movie is shown only in French part of Swiss. Last two weeks ago, I was in Lausanne. Only if I knew that the movie is in, I would have plan my trip accordingly. Anyway thanks for your review on the movie and reply.
ကျွန်တော်တို့လို ကိုယ်တိုင်မကြည့်လိုက်ရတဲ့ သူတွေအတွက် ခုလို ထင်မြင်ယူဆချက်လေးနဲ့ သေချာ ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ.. တခြားမိတ်ဆွေတွေအတွက်လဲ ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့ အတွက် ဒီပို့စ်လေးကို ကူးယူသွားပါတယ်......
ဒကာတော် ကိုညီလင်းသစ်ရေ အခုတောင် ကြည့်ချင်လှပြီဗျို့။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကော ရောက်နေပြီလား မသိဘူး။
kyaw htet aung said...
သူများတင်ပေးထားတာတွေ့လို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဒီပို့စ်လေး ဖတ်လိုက်ရတယ် .. အမတော့ မကြည့်ရသေးဘူး တင်ရင်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင်သွားကြည့်ဦးမယ်
စင်္ကာပူမှာတော့ ရုံတင်တာ မတွေ့ဘူး။ ရုံတင်ရင်သွားကြည့်ကြဖို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြောထားပြီသား။ ခုတိုင်းဆို အွန်လိုင်းကနေပဲ download လုပ်ပြီး ကြည့်ရမယ်ထင်တယ်။
တစ်ချို့တွေဆီက သိပ်မကြိုက်ဘူးလို့ ဝေဖန်သံတွေကြားပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ ကြည့်ချင်နေမိတာ။ ကိုညီလင်းသစ် ရေးထားတာကိုဖတ်ပြီး ပိုကြည့်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးနေတယ် ကြားကတည်းက အရမ်းကို ကြည့်ချင်နေခဲ့တာပါ။ ဇာတ်လမ်းကို movie review ပုံစံရေးထားတာ မျက်လုံးထဲရော စိတ်ထဲမှာပါ ခံစားလို့ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရုံတင်မယ့်နေ့ကိုသာ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ကိုညီလင်းသစ်ရေ... ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က သွားကြည့်ရလို့ သတိတာနဲ့ ၀င်မန့်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမိုင်းအချက်အလက်တစ်ချို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားနည်းချက်တွေ ရှိတာမှန်ပေမယ့် အမေစုတို့ မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခန်းတွေအားလုံးလိုလို ကောင်းပါတယ်။ မီရှဲလ်ယိုရော ဒေးဗစ်ပါ နှစ်ယောက်စလုံး အရမ်းသရုပ်ဆောင်ကောင်းကြပါတယ်။ ဇွန်အကြိုက်ဆုံးအခန်းကလည်း နိုဗယ်ဆုချီးမြှင့်ပွဲပါပဲ။ ဟိုဘက်ဒီဘက် နှစ်ဘက်အနေအထားကို ယှဉ်ပြီးရိုက်ပြသွားတာရော၊ နောက်ခံဂီတ ပံ့ပိုးမှုရော သိပ်ကောင်းပါတယ်။ မျက်ရည်တွေက ထိန်းမရအောင် ပိုးပိုးပေါက်ပေါက် ကျခဲ့တာပေါ့...။